Mitemo Uye Mamiriro ezvinhu-Kicheni Faucet, Pot Yekuzadza Mapombi, Mabhomba ekugezera | WOWOW
musha / Terms and Conditions
Iyi webhusaiti inoitwa ne www.wowowfaucet.com timu. Muwebhusaiti yese, mazwi ekuti "isu", "isu" uye "edu" anoreva timu ye www.wowowfaucet.com. www.wowowfaucet.com inopa ino webhusaiti, kusanganisira ruzivo rwese, maturusi uye masevhisi anowanikwa kubva kuno saiti kwauri, mushandisi, wakagadziriswa pakubvumidzwa kwako kwese mazwi, mamiriro, marongero uye zviziviso zvakataurwa pano.
Nekushanyira saiti yedu uye / kana kutenga chimwe chinhu kubva kwatiri, iwe unopinda mu "Sevhisi" yedu uye unobvuma kusungwa nemitemo nemamiriro anotevera ("TERMS AND CONDITIONS", "Terms"), kusanganisira iwo mamwe mazwi, mamiriro uye marongero zvinotaurwa apa uye / kana kuwanikwa ne hyperlink. Aya MAZWI NEZVIMWE zvinoshanda kune vese vashandisi vesaiti, kusanganisira vasina muganho vashandisi vari mabhurawuza, vatengesi, vatengi, vatengesi, uye / kana vanopa zvemukati.
Ndokumbirawo kuti muverenge aya MAZWI NEZVIMBADZO nokungwarira musati mawana kana kushandisa webhusaiti yedu. Nekuwana kana kushandisa chero chikamu chesaiti, unobvuma kusungwa neZVIREVO NEZVINHU. Kana iwe usinga bvumirani kune ese mazwi uye mamiriro echibvumirano ichi, saka haugone kuwana iyo webhusaiti kana kushandisa chero masevhisi. Kana aya MAZWI NEZVEMAITIRO achionekwa sechipo, kugamuchirwa kuri pachena kune aya MAZWI NEMITAMO.
Chero chipi zvacho chitsva maficha kana maturusi akawedzerwa kuchitoro chazvino anozovewo anozviisa pasi peZVIITO NEZVAKAITIKA. Iwe unogona kudzokorora yazvino vhezheni vhezheni ye TERMS NE CONDITIONS chero nguva pane ino peji. Isu tinochengetera kodzero yekuvandudza, kushandura kana kutsiva chero chikamu cheZVIREVO NEZVINOGONESESA nekutumira zvinyorwa uye / kana shanduko kune webhusaiti yedu. Ndiro basa rako kutarisa peji ino nguva nenguva kuitira shanduko. Kuenderera kwako kwekushandisa kana kuwana kune webhusaiti zvichitevera kutumirwa kweshanduko kunoita kugamuchirwa kweshanduko idzodzo.
CHIKAMU 1 - ONLINE STORE MAZWI
Nekubvuma kune aya MAZWI NEZVIMBADZO, haugone kushandisa zvigadzirwa zvedu chero zvisiri pamutemo kana zvisina mvumo chinangwa uye iwe, mukushandisa kweSevhisi, kutyora chero mitemo mudunhu rako (kusanganisira asi isina kuganhurirwa kumitemo yekopiraiti).
Hamufaniri fambisa chero nehonye kana mavhairasi kana bumbiro kuparadza hunhu.
A nokuvhunika kana kutyora chero Terms zvichaguma pakarepo kugumiswa enyu Services.
CHIKAMU 2 - ZVAKAITIKA ZVAKAWANDA
Isu kuchengetera kodzero yokuramba basa munhu chero chikonzero chero nguva.
Unonzwisisa kuti kugutsikana kwako (kwete kusanganisira kadhi mashoko), anogona kurapwa unencrypted uye inosanganisira (a) transmissions pamusoro network siyana; uye (b) kuchinja kuti aenderane uye kuchinjira michina zvinodiwa unobatanidza network kana namano. Credit kadhi ruzivo anogara encrypted panguva kuchinjirwa pamusoro network.
Unobvumirana kwete zvichiberekana, kutevedzera, kopi, kutengesa, resell kana kushandisa chero chikamu Service, kushandiswa Service, kana kuenda Service kana kuonana pamusoro Website kuburikidza iro basa inopiwa, pasina mvumo yakanyorwa nesu .
The misoro akashandiswa chibvumirano ichi vanobatanidzwa zvivanakire chete uye haangazvidembi kutadzisa kana zvimwewo kukanganisa izvi Terms.
CHIKAMU 3 - KURURAMA, KUKWANISA NENGUVA YEMAHARA YENYAYA
Hatina mhosva kana ruzivo kuti dziwanikwe nzvimbo iyi haisi yakarurama, kwakakwana kana ano. Mashoko ari panzvimbo iyi inowaniswa Vhuṱanzi chete uye hakufaniri kuvimbwa pamusoro kana akashandiswa oga hwaro zvisarudzo pasina kubvunza chikuru, rakanyatsorurama, zvizere kana nenguva zvikuru kunobva mashoko. Chero kuvimba mashoko ari panzvimbo iyi iri yenyu hatiripe.
nzvimbo iyi ingasanganisira mamwe mashoko nhoroondo. Historical mashoko, hazvo, hakusi kuitika uye inowaniswa kwako bhuku chete. Isu kuchengetera kodzero yokugadziridza zviri panzvimbo ino chero nguva, asi hatina vanosungirwa kunatsurudza chero mashoko yedu yepaIndaneti. Uchibvuma kuti basa rako kuti akuteerere kuchinja yedu yepaIndaneti.
CHIKAMU 4 - ZVINOGONESESA KUSHANDIRA NEMITENGO
Mitengo nokuti zvinhu zvedu tiri pasi kuchinja pasina chiziviso.
Isu kuchengetera kodzero chero nguva yokugadziridza kana kurega Service (kana chikamu kana kugutsikana chacho) pasina chiziviso chero nguva.
Isu haangavi nemhosva kwamuri kana kune yechitatu-nebato chipi nadzurudzo, mutengo shanduko, kuturika kana discontinuance zveMusangano.
CHIKAMU 5 - ZVINOGONESESA KANA MABASA (kana zvichibvira)
Vamwe zvinhu kana mabasa anogona kuwanikwa chete paIndaneti kuburikidza Website. zvigadzirwa izvi kana mabasa ave shoma zvakawanda uye inozviisa kudzoka kana kutsinhanisa chete maererano wedu Return Policy.
Takaedza zvose kuratidza zvakajeka sezvinobvira mavara nemifananidzo yezvigadzirwa zvedu zvinowanikwa muchitoro. Hatigone kuvimbisa kuti kombiyuta yako yekuongorora yega yevarai ichave yakarurama.
Isu kuchengetera kodzero, asi havana vaisungirwa, kushomeka kutengesa mishonga yedu kana Services kuti munhu, nzvimbo nharaunda kana utongi. Tinogona kushandisa kodzero iyi iri nyaya-ne-mhosva hwaro. Isu kuchengetera kodzero kutirambidza kwazvo chero zvinhu kana mabasa kuti tinopa. Kurondedzera All mishonga kana chigadzirwa Pricing inozviisa kuchinja panguva chero nguva pasina cherechedzai, panguva bedzi kungwara kwedu. Isu kuchengetera kodzero kurega chero chigadzirwa chero nguva. Chero kugoverwa chero chigadzirwa kana basa akaita panzvimbo iyi anoshaiwa apo rinorambidzwa.
Hatizivi zvaari kuti unhu upi zvigadzirwa, services, mashoko, kana zvimwe zvinhu yakatengwa kana kurikumbira uchasangana zvaunotarisira, kana kuti chero zvikanganiso zviri Service achaita kugadziriswa.
CHIKAMU 6 - KUKWANISIRA KWEZVINHU ZVOKUDZIDZA NEZVENYAYA
Isu kuchengetera kodzero yokuramba chero murayiro ukaisa nesu. Tinogona, kwedu bedzi kungwara, kungorara kana kubvisa zvizhinji yakatengwa pamunhu, por mhuri kana paminiti kuitira. kurambidzwa izvi zvingasanganisira mirayiro vakaiswa kana pasi chete mutengi nhoroondo, zvakafanana rokubhengi, uye / kana mirayiro kuti kushandisa chete Billing uye / kana kutumirwa kero. Mune chiitiko kuti isu kuchinja kuti kana kukanzura ndarayira, tinogona kuedza kuzivisa kwamuri kunyorera e-mail uye / kana Billing kero / dzenhare nhamba yatinowana panguva hurongwa chakaitwa. Isu kuchengetera kodzero dzisanyanya kana kurambidza murairo kuti, kwedu bedzi mutongo, sokuti kuiswa pachishandiswa dealers, Resellers kana Distributors.
Unobvumirana kupa kuitika, kwakakwana uye yakarurama kutenga uye nokuda mashoko kutenga zvose zvakaitwa pachitoro chedu. Unobvumirana kuti nokukurumidza kunatsurudza nhoroondo yako uye mamwe mashoko, kusanganisira email address uye kadhi nhamba uye yapfuura misi, kuitira kuti tinogona kupedza kwema enyu uye kutaura nemi sezvinodiwa.
Kuti uwane mamwe mashoko, tapota funga redu redu rezvekutora.
CHIKAMU 7 - MAZVIPO ANOSARUDZA
Tinogona kukupa kuwana rechitatu-vebato maturusi pamusoro izvo isu kana kuongorora kana kuva chero kuzvidzora kana chiyamuro.
Iwe kubvuma uye vanobvuma kuti isu zvinopa mukana munowanika "se ari" uye "se kuwanikwa" pasina warranties, zvinomiririra kana mamiriro chero mhando uye pasina mvumo. Isu haangavi liability chero kunobva kana chokuita kushandisa kwaunoita Opsioneel rechitatu-vebato nematurusi.
Chero kushandiswa nemwi pamusoro Opsioneel zvishandiso akauya kuburikidza nzvimbo zvachose kuruoko rwenyu hatiripe uye nokungwara uye unofanira nechokwadi kuti imi vanoziva uye uchibvumira okuti pairi maturusi anopiwa no kuMudzidzisi yechitatu bato Provider (s).
Tinogona zvakare, mune ramangwana, kupa masevhisi matsva uye / kana maficha kuburikidza newebhusaiti (kusanganisira, kuburitswa kwematurusi matsva nezviwanikwa). Aya matsva maficha uye / kana masevhisi anozovewo anozviisa pasi peZVIREVO NEZVINHU.
CHIKAMU 8 - MATATU-ECHITATU-CHEMA
Vamwe kugutsikana, zvinhu uye rubatsiro Via Service yedu zvingasanganisira zvokuvakisa yechitatu-mapati.
Third-vebato Links panzvimbo iyi vanogona kutungamirira kuti rechitatu-vebato Websites dzisina vemumapato nesu. Hatina basa kuongorora kana vanoongorora zvirimo kana kururama uye tisina kutanga uye haangazvidembi kuva liability kana basa chipi chechitatu-vebato zvinhu kana Websites, kana kuti zvimwe zvinhu, zvigadzirwa, kana mabasa yechitatu-mapati.
Isu hatisi mhosva yekukuvara kana kukuvara kune chekuita nekutenga kana kushandiswa kwezvinhu, masevhisi, zviwanikwa, zvemukati, kana chero kumwe kuitirana kunoitwa zvine chekuita neese wechitatu-bato mawebhusaiti. Ndokumbirawo uongorore nokungwarira mapato evatatu uye maitiro uye ita shuwa kuti unozvinzwisisa usati waita chero chiitiko. Zvichemo, zvirevo, kunetsekana, kana mibvunzo ine chekuita neyechitatu-bato zvigadzirwa zvinofanirwa kunongedzwa kune wechitatu-bato.
CHIKAMU 9 - KUSHANDISA KWAMUShandisi, KUDZOKA NEZVIMWE ZVIMWE ZVINOTUMIRWA
Kana, pakukumbira kwedu, ukatumira zvimwe zvakatemwa (semuenzaniso kukwikwidza kupinda) kana pasina chikumbiro kubva kwatiri unotumira mazano ekugadzira, mazano, mazano, zvirongwa, kana zvimwe zvinoshandiswa, ingave paindaneti, neemail, nepositi kana. (pamwe chete, 'makomendi'), unobvuma kuti, chero nguva, tisina kurambidzwa, gadzirisa, teedzera, shambadza, govanisa, shandura uye zvimwe tishandise mune chero ipi neipi mirayiridzo yaunotitumidzira. Isu tiripo uye hatizove pasi pechisungo (1) chengetedza chero mhinduro muchivimbiso; (2) kubhadhara mubhadharo wechero chirevo; kana (3) kupindura chero mhinduro.
Tinogona, asi hatina chisungo chekutarisa, kugadzirisa, kana kubvisa zvirimo zvatinoona mukufunga kwedu chete hazvisi pamutemo, zvinogumbura, zvinotyisidzira, zvinosvibisa, zvinosvibisa, zvinonyadzisira, zvinonyadzisa kana zvimwe zvinopesana kana kutyora midziyo yehungwaru yebato kana izvi TERMS NEZVINODZIDZO. .
Uchibvuma kuti mhinduro dzako hamungandivambi haro kodzero ipi yechitatu vebato, kusanganisira Copyright, zvinomusiyanisa nevamwe, zvakavanzika, unhu kana zvimwe kana proprietary kodzero. Mimwe vanobvuma kuti mhinduro dzako hamungandivambi dzine libelous kana zvimwewo zvisiri pamutemo, okutuka kana majee zvinhu, kana ane chero Utachiona kombiyuta kana zvimwe malware kuti aigona chero nzira sei nokushanda Service kana chokuita Website. Unogona kushandisa rimwe mae-mail venhema kero, vachiedzesera kuva mumwe munhu asiri iwe, kana zvimwewo isu kana yechitatu-mapati atsause matangiro chero mashoko. Imi chete basa chero mashoko waita kwavo kururama. Tinotora hapana basa uye vanofungidzira hapana liability chero mashoko re nemi kana yechitatu-party.
CHIKAMU 10 - Ruzivo
Kuisa kwako kwehupfumi hwemunhu kuburikidza nechitoro kunotungamirirwa neChinyorwa Chedu.
CHIKAMU 11 - ZVIKANGANISO, ZVISINA KUITIKA NEZVIMWE
Apo neapo pangava mashoko pamusoro yedu yepaIndaneti kana ari Service ine typographical nokukanganisa, inaccuracies kana omissions kuti chokuita chigadzirwa rondedzero, Pricing, kushambadza, inopa, chigadzirwa kutumirwa mhosva, dzaifanoiswa nguva uye Kuwanikwa. Isu kuchengetera kodzero kugadzirisa chero zvikanganiso, inaccuracies kana omissions, uye kushandura kana kunatsurudza mashoko kana kukanzura mirayiro kana ruzivo ari Service kana chipi kufanana Website hazvina kururama chero nguva pasina risati chiziviso (kusanganisira mushure iwe pasi murayiro wenyu) .
Isu ita hapana vanosungirwa kunatsurudza, natsai kana kujekesa mashoko ari Service kana chimwe chokuita Website, kusanganisira pasina kwezvokushandisa, PRICING mashoko, kunze sezvo nomutemo. No wainyatsotaura update kana kuzorodza zuva rakaiswa mune Service kana chimwe chokuita Website, zvinofanira kuratidza kuti mashoko ose ari Service kana chipi kufanana Website chakagadziridzwa kana akagadziridzwa.
CHIKAMU 12 - KUSHANDISWA KUSHANDISWA
Pamusoro pezvimwe zvinorambidzwa sezvakataurwa muZVIITI NEZVINOGONESESA, unorambidzwa kushandisa saiti kana zvirimo: (a) chero chinangwa chisiri pamutemo; (b) kukumbira vamwe kuti vaite kana kutora chikamu mukuita zvisiri pamutemo; (c) kutyora chero epasirese kana eUK mirau, mitemo, mitemo, kana zvemunharaunda zvisungo; (d) kutyora kana kutyora kodzero dzepfuma yedu kana kodzero dzevamwe dzevamwe; (e) kushungurudza, kushungurudza, kutuka, kukuvadza, kusvibisa, kunyomba, kutyisidzira, kana kusarura zvichibva pahunhu, zvebonde, chitendero, dzinza, dzinza, zera, kwakatangira nyika, kana hurema (f) kuendesa ruzivo rwenhema kana rwunotsausa; (g) kurodha pasi kana kuendesa hutachiona kana chero imwe mhando yekodhi yakaipa iyo kana inogona kushandiswa nenzira ipi neipi inokanganisa mashandiro kana mashandiro eSevhisi kana yewebhusaiti inoenderana, mamwe mawebhusaiti, kana Internet; (h) kuunganidza kana kuteedzera ruzivo rwevamwe; (i) ku spam, phish, pharm, kunyepedzera, dandemutande, kukambaira, kana kukwenya; (j) yechinhu chero chipi zvacho chinonyadzisa kana chekuita unzenza; kana (k) kupindira kana kutapudza zvinhu zvekuchengetedza zveSevhisi kana chero webhusaiti inoenderana, mamwe mawebhusaiti, kana Internet. Isu tinochengetera kodzero yekumisa mashandisiro ako eSevhisi kana chero inoenderana webhusaiti kutyora chero ipi inorambidzwa mashandisiro.
CHIKAMU 13 - KUSANANGURA KWEMAWARANTI; KUSANGANISWA KWEMAHARA
Hatidi hazvivimbisi, dzinomiririra kana warandi kuti kushandisa kwaunoita basa redu richava risina kumiswa, nenguva, akachengeteka kana kukanganisa-akasununguka.
Hatizivi zvaari kuti migumisiro kuti kuwanikwa kubva pakushandisa basa richava yakarurama kana rakavimbika.
Uchibvuma kuti nguva nenguva tinogona kubvisa basa isingazivikanwi nguva kana kudzima basa chero nguva, pasina cherechedzai kwamuri.
Iwe unobvumirana pachena kuti kushandiswa kwako, kana kusakwanisa kushandisa, basa racho riri pangozi yako. Basa nezvose zvakagadzirwa nemitambo yakakumikidzwa kwamuri kuburikidza nebasa iri (kunze kwekunyatsotsanangurwa nesu) rakapiwa 'sezvazviri' uye 'sezviripo' zvekushandisa kwenyu, pasina chero mumiririri, zvivimbiso kana mamiriro ezvinhu epi zvingave, kana kutaura kana rinoreva, kusanganisira zvose zvinonzi warranties kana mamiriro ekutengeserana, merchantable quality, kufanana kwechinangwa chairo, kusagadzikana, musoro, uye kusina kukanganisa.
Mune mhaka isu isu, vatungamiri vedu, vatungamiri, vashandi, vanobatana navo, vashandi, makambanikoni, vatengesi, vatengesi, vateresi vevashandi kana varairi vemhosva vanogona kutongerwa chero kukuvadzwa, kurasikirwa, kudai, kana kuti chero zvakananga, zvisinganzwisisiki, zvakangoita, kurangwa, zvikanganiso zvakakosha zvemhando ipi zvayo, kusanganisira, pasina kukanganisa kurasikirwa nehupfumi, kurasikirwa mari, kurasikirwa mari, kurasikirwa kwedata, kushandiswa kwemari, kana zvimwe zvinokanganisa zvakafanana, zvingave zvakagadzirwa musangano, kutadza (kusanganisira kusaregerera), mutoro wakasimba kana kuti zvimwe, zvichibva kushandiswa kwemhando ipi neipi yebasa kana zvimwe zvigadzirwa zvakashandiswa uchishandisa basa racho, kana kuti chero ipi zvayo inobatanidzwa nenzira ipi zvayo kumashandisirwo ako ebasa kana chero chigadzirwa, kusanganisira, asi kwete kune, chero zvikanganiso kana kuregererwa mune chero zvayo, kana chero kurasikirwa kana kukanganisa kwemhando ipi zvayo yakabatanidzwa semugumisiro wokushandiswa kwebasa kana chero zvakagadziriswa (kana chigadzirwa) chakatumirwa, chinoparidzirwa, kana kuti chakaita kuti chiwanikwe kuburikidza nebasa racho, kunyange kana vakurudzirwa kuti vanogona. Nemhaka yokuti vamwe vanoti kana masimba haabvumi kuregererwa kana kuregererwa kwemhosva kune zvakakosha kana kuti zvinokanganisa, mumatunhu akadaro kana masimba, mutoro wedu uchasvika pamwero mukuru wakabvumirwa nemutemo.
CHIKAMU 14 - KUZIVISWA
Unobvuma kuregerera, kudzivirira uye kubata zvisina njodzi isu nemubereki wedu, makambani, vanobatana, vatinoshanda navo, maofficial, vatungamiriri, vamiririri, makondirakiti, marezinesi, vanopa masevhisi, makondirakiti, vanotengesa, vadzidzi nevashandi, vasingakuvadzi kubva kune chero chirevo kana kudiwa, kusanganisira zvine musoro. mari yemagweta, inoitwa nechero wechitatu-bato nekuda kana kukonzerwa nekutyora kwako ZVIREVO NEZVIMBADZO kana magwaro avanobatanidza nereferenzi, kana kutyora kwako chero mutemo kana kodzero dzechitatu-bato.
CHIKAMU 15 - KUSIMBIKA
Kana zvikaitika kuti kupihwa kupi kweZVIREVO NEZVIMWE ZVINOGONESESWA kunge zvisiri pamutemo, zvisina basa kana zvisingamanikidzike, gadziriro iyi inozomanikidzwa kusvika pamwero uzere unobvumidzwa nemutemo unoshanda, uye chikamu chisingamanikidzike chichaonekwa sechibviswa kubva paZVIREVO NEZVI. ZVIRATIDZO, kutsunga kwakadaro hakuzokanganisa huchokwadi uye kumanikidza kwechero zvasara zvasara.
CHIKAMU 16 - KUGumisa
Nokubatira uye atipinza munataisireva vemapato vaparawo asati kugumiswa musi anofanira kupona kugumiswa chibvumirano ichi nokuda zvinangwa zvose.
Aya MAZWI NEZVIMWE zvinoshanda kunze kwekunge uye kusvika zvabviswa newe kana nesu. Unogona kumisa aya MAZWI NEZVIMBADZO chero nguva nekutizivisa kuti hauchadi kushandisa maSevhisi, kana paunorega kushandisa saiti yedu.
Kana mukutonga kwedu kwega iwe ukatadza, kana isu tichifungidzira kuti watadza, kuteedzera chero izwi kana kupihwa kweZVIREVO NEZVINODZIDZO, isu zvakare tinogona kumisa chibvumirano ichi chero nguva pasina ziviso uye iwe ucharamba uine mhosva yezvese zvikwereti kusvika uye kusanganisira zuva rekumiswa; uye / kana nekudaro zvinokurambidza kuwana maSevhisi edu (kana chero chikamu chayo).
CHIKAMU 17 - CHIBvumirano CHETE
Kukundikana kwedu kushandisa kana kumanikidza chero kodzero kana kupihwa kweZVIREVO NEZVINOGONESESA hakugone kuregedza kodzero yakadaro kana kupihwa.
Aya MAZWI NEZVIMWE uye chero marongero kana mitemo yekushanda yakatumirwa nesu panzvimbo ino kana maererano neThe Service inoita chibvumirano chose nekunzwisisa pakati pako nesu nekutonga mashandisiro ako eSevhisi, ichisimudzira chero zvibvumirano zvisati zvaitika kana zvenguva, kutaurirana uye zvirevo. , kunyangwe zvekutaurwa kana zvakanyorwa, pakati pako nesu (kusanganisira, asi zvisina kuganhurirwa kune, chero mavhezheni ekutanga eEMAZWI NEZVINOGONESESA).
Chero kusanzwisisika mukududzirwa kweZVIREVO NEZVAKAITIKA hazvifanirwe kutorwa zvichipesana nebato riri kunyora.
CHIKAMU 18 - MUTEMO WOKUTONGA
Aya MAZWI NEZVIMWE uye zvibvumirano zvakaparadzana zvatinokupai maSevhisi zvichatungamirwa nekuumbirwa zvinoenderana nemitemo yeUK.
CHIKAMU 19 - ZVINOGONESESA KUMASHURE NEZVINHU
Iwe unogona kudzokorora yazvino vhezheni vhezheni ye TERMS NE CONDITIONS chero nguva pane ino peji.
Isu tinochengetera kodzero yacho, pahungwaru hwedu chete, kugadzirisa, kushandura kana kutsiva chero chikamu cheZVIREVO NEZVINODZIDZO nekutumira zvinyorwa uye shanduko kune webhusaiti yedu. Ndiro basa rako kutarisa webhusaiti yedu nguva nenguva kuitira shanduko. Kuenderera kwako kwekushandisa kana kuwana kune webhusaiti yedu kana sevhisi zvichitevera kutumirwa kweshanduko kune aya MAZWI NEZVIMBADZO zvinoreva kugamuchirwa kweshanduko idzodzo.